Diyaarad Dirqi Ugu Degtay Duleedka MuqdishO – IFTIINI SOMALIA
Posted on October 12, 2015 October 12, 2015 by BASHIR HASHI YUSSUF	Posted in somali weyn
Diyaarad Dirqi Ugu Degtay Duleedka
MOGADISHU Diyaarad xamuul oo caawa in muddo ah ku dul wareegeysay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in ay si dirqi ah ku degtay.
Wararka ayaa sheegaya in diyaaradda ay ku degtay inta u dhaxeysa deegaanka carbiska iyo magaalada Muqdisho, kadib markii uu duuliyihii si deg deg ah ugu dejiyo waddada Afgooye.
Bur-bur xooggann ayaa gaaray diyaaradda, balse saraakiil ayaa VOA-da u xaqiijiyey in lix qof oo saarnaa diyaaradda oo ay ku jiraan duuliyihii iyo shaqaalihii saarnaa dayaaradda ay badbaadeen.
Lixda qof ee saarnaa diyaaradda ayaa gebigood ahaa ajaaniib, sida uu VOA u sheegay Dhamme Amiin Maxamed Cusmaan, oo ah taliyaha booliiska ee qeybta Afgooye oo goobta tagay.
Diyaaraddan, ayaa xilli habeen ah soo gashay hawada magaalada Muqdisho, waxaana ay awoodi weysay inay soo degto, maadaama garoonka uusan shaqyen habeenkii, islamarkaana aysan jirin wax nalal ah oo ka shidan.